Idatha Ongabelana Ngayo - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Yamazwe Ngamazwe
Leli khasi linikezelwe ekwabelaneni ngedatha yesikhungo sokubhala. Uma ungathanda ukuthi sixhumanise nedathasethi yakho noma ikhosombe, sicela ugcwalise ifomu ezansi ekhasini. Qiniseka ukuthi umlayezo wakho uhlanganisa incazelo yedathasethi, iwebhusayithi noma i-URL lapho ingafinyelelwa khona, nesihloko sayo.
Isikhungo Sokubhala Session Note Data Repository iwumkhiqizo wokubambisana phakathi kuka-Genie Giaimo, Christine Modey, Candace Hastings, kanye no-Joseph Cheatle, abazuze uxhaso lwe-IWCA luka-2018 “Lokwakha Inqolobane Yemibhalo: Imaphi Amanothi Eseshini, Amafomu Okungena, kanye Neminye Imibhalo Engasitshela Ngomsebenzi Wokubhala Izikhungo.”
I-Writing Center Roots Project yisipredishithi esihlanganiswe u-Sue Mendelsohn esibala izinkulungwane zezikhungo zokubhala emhlabeni jikelele neminyaka eyasungulwa. Ungakwazi ukwengeza isikhungo sakho sokubhala kusipredishithi ngokugcwalisa le Ifomu Lezinsuku Zokusungulwa Kwesikhungo Sokubhala.
Isikhungo Sokubhala Imibiko Yonyaka Yokuvakasha Komfundi. Lo mbhalo uhlanganisa izixhumanisi zedatha yesikhungo sokubhala mayelana nokuvakasha kwaminyaka yonke. Ungangeza idatha mayelana nokuvakasha kwaminyaka yonke kwesikhungo sakho sokubhala ngokugcwalisa Isikhungo Sokubhala Ifomu Lombiko Wokuvakasha Wonyaka.
Igama noma Amagama Abanikeli(Edingekayo)
I-URL (lapho okuqukethwe kungafinyelelwa khona)(Edingekayo)